Doonya siday boqolaal qof oo ku degay xeebaha Liibiya | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Boqolaal qof ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen kaddib markii laba doonyood oo ay saarnaayeen ku dhawaad 500 oo qof oo muhaajiriin ah ay ku dagtay xeebaha magaalada Zuwara ee dalka Liibiya.
Howlgal samatabixin ah oo lagu soo badbaadinayo mid ka mid ah doomahaasi oo degtay xilli hore oo caawa ah ayaa lagu soo warramayaa in uu halkaasi weli ka socdo.
Dalka Liibiya kama aysan jirin dowlad dhexe muddo sanad ah, iyadoo waddanka intiisa badan ay maamulaan maleeshiyaad iska soo horjeeda.
Labada doomood ayaa soo codsaday in la caawiyo waxyar un kaddib markii ay ka soo shareecdeen xeebta Zuwara ee Galbeedka dalka Liibiya.
Mid ka mid ah doonyahaasi ayaa degtay saacadihii hore ee shalay oo Khamiis aheyd, halka doonida labaadna ay degtay xilli dambe isla maalintaa.
Ugu yaraan 20 qof oo muhaajiriin ah ayaa lagu soo waramayaa in laga soo badbaadiyay labadaasi shil.
Waxaa soconaya howlgal baadigoob ah oo ay wadaan ciidammada ilaalada xeebaha Liibiya oo ay ku baadi goobayaan mid ka mid ah doonyahaasi degay.
Qof ku sugan magaalada Zuwara ayaa BBCda u sheegay in ugu yaraan 100 mayd la geeyay isbitaalka magaalada, kuwaas oo ay ku jiraan muwaadiniin u kala dhalatay wadammada Suuriya, Bangladesh iyo dhowr dal oo ka tirsan dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika.
Bal arrintan si madax bannaan looma xaqiijin karo.
Ciidammada ilaalada xeebaha ee Liibiya ayey xadidan tahay awadooda ay badda uga sameyn karaan howgal ballaaran oo samatabixin ah.
Inta badan dadkii saarnaa doonyahaasi ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen.